Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ku baaqay in nabadda laga shaqeeyo - BBC News Somali
Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ku baaqay in nabadda laga shaqeeyo
Iyadoo saacado un ay ka harsantahay doorashada guud ee Kenya ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta, waxaa uu ugu baaqay shacabka in ay ka shaqeyaan xasiloonida iyo midnimada qaranka.
Mr Kenyatta oo isagu hogaanka dalka qabtay sannadkii 2013-ka, kana soo jeeda qowmiyada Kikuyu ayaa isaga oo ka hadlayay telefishenka dowladda waxaa uu ku booriyay codbixiyeyaasha inay iska diidaan cagajugleynta iyo inay ka fogaadaan qalalaase ka dhasha doorashada.
Ninka sida weyn ay isku hayaan ee Raila Odinga oo isna ka soo jeeda qowmiyada Luo ayaa walaac ka muujiyay in lagu shubto doorashada, waxaana uu intaa ku daray in sababta loo daad gureeyay ciidammo boolias ah oo gaaraya boqol iyo konton kun oo askari ay tahay in lagu cabsi geliyo codbixiyeyaasha.
Shakhsiyaad uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Mareykanka, Barack Obama ayaa ku baaqay in laga shaqeeyo nabadda inta lagu guda jiro doorashada. Sidoo kale xoghayihii hore ee arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka John Kerry oo kamid ah kormerayaasha caalamiga ayaa sheegay in laga yaabo in saacado gudahood lagu dhawaaqo natiijada doorashada.
Ra`yi uruurintii u dambesay ee laga sameeyay tartanka madaxtinimada ee Kenya, ayaa muujineyso in Madxaweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga ay si aad ah isugu dhowyihiin.